I-HTC ilahlekelwa ngumnyango wayo we-R & D esikhundleni sika-1.100 million dollars | Izindaba zamagajethi
I-HTC ilahlekelwa ngumnyango wayo we-R & D esikhundleni sika- $ 1.100 billion
-Google yenza izindaba futhi futhi kulokhu ngemuva kokufinyelela esivumelwaneni no HTC ukuthola ukulawula ingxenye yokuhlukaniswa komakhalekhukhwini komkhiqizi. Njengoba uzokhumbula impela, vele ngoSepthemba wangonyaka odlule kwaxoxwa ngaleli thuba, yize bekungakabikho kuze kube manje lapho inkampani yezinjini zokucinga ithole zonke izimvume ezidingekayo zokwenza lokhu kuthola.
Kungenzeka kanjani ukuthi kungenjalo, futhi kwaGoogle bakhethe eyabo blog ukwenza imininingwane ibaluleke njengalesi sikhulu. Ekungeneni okushicilelwe, ogama lakhe lingu- Rick Osterloh, Iphini Likamongameli Ophakeme we-Hardware kwaGoogle, lamukela abasebenzi balo abasha enkampanini. Kuleli qophelo kufanele kuphawulwe ukuthi ngokweqiniso IGoogle ithole ithimba labantu abaqeqeshiwe abayi-2.000 XNUMX abavela eMnyangweni 'Inikwe amandla yi-HTC',, phakathi kwezinye izinto, ezazibophezele kuze kube namuhla ukuthuthukiswa kwamaphrojekthi ahlukene anjenge-Pixel mobile yakwaGoogle.
1 IGoogle ikhetha ithrekhi esheshayo futhi ithatha umnyango wezokucwaninga nentuthuko weHTC ukudala amatheminali ayo alandelayo
2 Yize ithengise umnyango wayo Wezocwaningo Nentuthuko, iHTC ngeke iyeke ukukhiqiza omakhalekhukhwini
IGoogle ikhetha ithrekhi esheshayo futhi ithatha umnyango wezokucwaninga nentuthuko weHTC ukudala amatheminali ayo alandelayo
Ukuze ube ngcono kangcono emcabangweni wokuthi iGoogle ithenge leli flethi elithile kusuka ku-HTC ngokushintshanisa ama-dollar ayizigidi eziyi-1.100, ikutshele lokho 'Inikwe amandla yi-HTC' akuyona enye into ngaphandle komnyango wezocwaningo nentuthuko i-HTC eyayinawo kuze kube manje. Lokhu kusho ukuthi i-Google ayithenganga lutho ngaphansi komnyango ophethe ukwakha bonke ubuchwepheshe obusha be-HTC, obufanayo obabuphethe kwaze kwaba ezinyangeni ezimbalwa ezedlule zokuthuthukisa bonke ubuchwepheshe obukhona kumafoni ohlobo lwe-Taiwan.
Ngale ndlela elula, yize ibiza kakhulu, I-Google iqinisekise ukuthi ayithembi kwezinye izinkampani ukuthi zenze amafoni ayo kanye namadivayisi azayo azongena emakethe. Ngakolunye uhlangothi, iphinde yaqinisekisa ukuqhubeka kwezizukulwane ezintsha zePixel ngoba iphrojekthi incike iminyaka eminingi konjiniyela abafanayo abaqashile futhi manje abazoba yingxenye yabasebenzi bayo ababanzi.
Njengoba kungafundwa kokungena okushicilelwe ngu Rick Osterloh:
Labo ozakwethu abasha baletha isipiliyoni samashumi eminyaka befeza inani 'izithelo zokuqala', ikakhulukazi embonini ye-smartphone, efaka ukwethulwa kwe-3G smartphone yokuqala ngo-2005, ifoni yokuqala ethinta i-touch-centric ngo-2007, kanye nefoni yokuqala ye-all-metal unibody ngo-2013. Le futhi iyinsiza efanayo ebesisebenza ngayo eduze ekwakhiweni kwePixel nePixel 2
Yize ithengise umnyango wayo Wezocwaningo Nentuthuko, iHTC ngeke iyeke ukukhiqiza omakhalekhukhwini
Ngasohlangothini lweHTC, iqiniso lokuthi bathengise umnyango wabo wezocwaningo nentuthuko akusho ukuthi bazoshiya umhlaba wezingcingo eziphathwayo, kunalokho, njengoba lonke lolu lwazi luba semthethweni AbakwaHTC bakhiphe isitatimende esisemthethweni bememezela ukuthi inkampani izoqhubeka nokwethula amatheminali amasha.
Uma sinaka konke okushiwo ngabahlaziyi ngokuthenga, kulindeleke ukuthi i-HTC iqhubeke ngaphakathi kwemakethe yezingcingo eziphathwayo yize inani lokwethulwa lizoba yimakethe kakhulu njengoba inkampani izoqala gxila kuphela kumamodeli azuza kakhulu banikelwa minyaka yonke. Ngakolunye uhlangothi, kungenzeka ukuthi i-HTC izoqala ukugxila kwezinye izinhlobo zezimakethe okuwuphawu lokulinganisa namuhla, njengokuthuthukiswa kwezingilazi ezingokoqobo ezintsha noma imakethe ye-Intanethi Yezinto.
Ukubuyela kuGoogle, ngalokhu kutshalwa kwezimali kuyacaca ukuthi inkampani ifuna ukugxila emizameni yayo emkhakheni wemakethe ongashiya izinzuzo eziningi njenge ukuthuthukiswa nokwenziwa kwehardware yakho. Njengoba uzokhumbula ngokuqinisekile, eminyakeni edlule babegxile kakhulu ekuvumeleni ezinye izinkampani zizinikele ekwenzeni imikhiqizo yazo ngenkathi zisungula isoftware yangokwezifiso ngokuphelele, umkhuba, eminyakeni edlule, osushintshe ngokuphelele kwifilosofi nasendleleni yokwenza iphuzu lokuthi iGoogle ekugcineni ihlanganise nje uchungechunge lochwepheshe abaqeqeshiwe kakhulu kubasebenzi bayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Izaziso » I-HTC ilahlekelwa ngumnyango wayo we-R & D esikhundleni sika- $ 1.100 billion
Ungayilungisa kanjani inqubo "com.google.process.gapps iyekile" iphutha